नायिका रीमा विश्वकर्माले किन गरिन् डिभोर्स ? - आयो खबर
नायिका रीमा विश्वकर्माले किन गरिन् डिभोर्स ?
२०७४ मंसिर २३ प्रकाशित ०९:२४
नायिका रीमा विश्वकर्माले बेलायतमा बस्दै आएका रोबर्ट बीकसँग २ बर्ष अगाडि बिहे गरेकी थिइन् ।
यस लगतै केही म्यूजिक भिडियोमा समेत काम गरिसकेकी मोरङकी बर्षा र रोबर्ट इन्गेजमेन्ट गरेको देखिन्छ । रोबर्टले बर्षासँग इन्गेजमेन्ट गरेपछि कतै रीमा र उनीविच डिभोर्स त भएको होइन भन्ने प्रश्न सोझिएको छ । वुझिएअनुसार, रीमाले केही महिना अगाडि रोबर्ट र आफ्नो डिभोर्स हुन लागेको उनी निकट साथीहरुसँग बताएकी थिइन् । यसैले, पनि रीमा र रोबर्टको डिभोर्सपछि रोबर्टले अर्को बिहे गर्न लागेको वुझ्न सकिन्छ । यो बिषयमा वुझ्न खोज्दा रीमाको फोन उठेन ।
खबरअनुसार रीमा र रोबर्टविच सहमतिमै २ साता अगाडि डिभोर्स भएको हो । डिभोर्स पश्चात रोबर्टले बर्षासँग इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् । नेपाल आएर उनले रीमासँग सहमतिमै डिभोर्स गरेको श्रोतले बतायो । यसपछि, बर्षा र रोबर्टको शुक्रबार इन्गेजमेन्ट भएको थियो । बिहेको मिति भने तय भएको छैन । इन्गेजमेन्ट गरेर रोबर्ट बेलायत फर्किसकेका छन् ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर २३ प्रकाशित ०९:२४
सेवाग्राहीले काम छिटो गर्ने नाममा कर्मचारीलाई घुस्याहा बनाएः मन्त्री अर्याल
भ्यानको ठक्करले दुई जना आक्समीक कक्षमा
मोरङ कारागारमा रहेका ९ जना कैदीबन्दीको मृत्यु